अन्योलमा फसेको एमसीसी देउवाले पार लाउलान् ? - EKalopati
अन्योलमा फसेको एमसीसी देउवाले पार लाउलान् ?
काठमाडाैं । एमसीसी सम्झाैता अन्योलमा फसिरँहँदा यसको पार देउवा सरकारले पार लगाउला कि नलगाउला भन्ने अन्योलमा फसेको छ । करीब ५५ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सहयोग बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता झन् अन्योलमा फस्दै गएको छ ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ मा परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र ती नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने भन्नुको अर्थ एमसीसीलगायत मुद्दा तत्काल अगाडि बढ्दैन भन्ने नै हो । सत्ता गठबन्धनभित्रको प्रमुख दल माओवादी केन्द्र मात्रै नभई जनता समाजवादी पार्टी पनि एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा खुलेरै देखिँदै आएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट ।
Previous articleसुकुम्बासी आयोग खारेजी कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र सकिएको हो भूमिहीनले जमीन पाउॅछन् : थापा
Next articleइजरायल रोजगारीको प्रलोभनमा ठगी